China High mukurumari pitikoti nemishonga yemishenjere panze decking Kugadzira uye Fekitori | Goridhe Bamboo
REBO® bamboo decking board inosimbiswa kugadzikana Kirasi 1 (yakasimba kwazvo) uye shandisa Kirasi 4 (ine ivhu uye / kana mvura nyowani). Iine hunhu hwakafanana neyakaomeswa huni. Kuoma kwaro brinell kwakatokwirira kupfuura huni. Iwo mativi akakomberedzwa anoita kuti kumisikidza kuve nyore kwazvo, iine simbi dzesimbi.
REBO® bamboo decking board yakagadzikana kwazvo mushure mekurapa kwethermo kwakabatana pamwe neanopwanya sosi mitsetse. Iyo yakasarudzika kupisa kurapwa uye yakadzvanywa maitiro inoita kuti bhodhi rive repamusoro mukurumari hunhu, iyo inogara yakasimba kwazvo mumamiriro ekunze akasiyana. Kunyangwe mushure memakore mazhinji, mabhodhi emishenjere anogara akatwasuka, achisiya mabhodhi ari akachena grey, chitarisiko chinoramba chakadzikama. REBO® bamboo board yakakodzera kwazvo kunyorera kwekunze, uye inoshandiswa zvakanyanya mukushongedza, pasi pevhu, terati, patio, balcony, projekti yemaspala, nezvimwe.
REBO® bamboo decking board inosimbiswa kugadzikana Kirasi 1 (yakasimba kwazvo) uye shandisa Kirasi 4 (ine ivhu uye / kana mvura nyowani). Iine hunhu hwakafanana neyakaomeswa huni. Kuoma kwaro brinell kwakatokwirira kupfuura huni. Iwo mativi akakomberedzwa anoita kuti kumisikidza kuve nyore kwazvo, iine simbi dzesimbi. Iwo ma clip akaiswa mumaburi emativi uye akamisikidzwa mukati mejoists, saka mapuranga akagadzika zvakatsiga. Nenzira iyi zvidimbu zvisingaonekwe kuti zvionekwe uye zvinoratidza kutaridzika zvakanaka. Iyo yepamusoro yakakura wave wave dhizaini uye musoro unogona kuve wakapfava kana T&G system.
Pashure: Rima Ruvara hapana deformation yemishenjere yekucheka bhodhi
Zvadaro: Kuisirwa nyore tambo yakarukwa yemishenjere yekunze kwevhu
Bamboo Akabatwa Decking
Bamboo Kushongedza Kunze
Bamboo Hardwood Kuratidzira
Bamboo Kunze Kushongedza
Bamboo Kunze kwekushongedza Tile
Bamboo Timber Kushanda
Bamboo Wood Kuratidzira
Injiniya Bamboo Decking
Anorema Bamboo Decking
Moso Bamboo Anoshongedza
Yakagadziriswazve Bamboo Decking
Strand rakarukwa Bamboo Decking